Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 5)
Ku soo dejiso Launcher Black, oo ah Launcher miisaan fudud oo bilaash ah oo keliya 24 saacadood
Ka soo dejiso Launcher Madow bilaash, ugu fudud, ugu fudud uguna waxqabadka badan Google Play Store dukaanka hadda bilaash muddo xadidan.
Sidee qaab qarsoodi u shaqeeyaa Google Chrome
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sida habkan biraawsarka qarsoodiga ah uga shaqeeyo Android Ka hel wax walba oo ku saabsan qaabkan Google Chrome.
Tirada qalabka ku habboon beta-ka Android Q ayaa ka weynaan doona kan leh Android P
Sanadkii hore Google I / O, Google wuxuu ku dhawaaqay in qalabka Android Pie beta kaliya laga heli doonin ...
Sida loo qariyo sawirada iyo fiidiyowyada boggaaga Instagram halka ay kuugu calaamadeeyaan
Ka ogow wax badan oo ku saabsan habka aan si fudud ugu qarin karno sawirrada iyo fiidyowyada aan ku leennahay barta Instagram bogga hore.
Sida loo aamusiyo farriimaha tooska ah ee barta Instagram
Ka ogow wax badan oo ku saabsan tallaabooyinka ay tahay inaan raacno si loo aamusiyo farriimaha tooska ah ee farriimaha barta 'Instagram'.
Sida loo ogaado haddii barnaamijyada ku jira APK ay yihiin kuwo been abuur ah
Soo ogow sida aan ku ogaan karno haddii codsi qaab APK ah uu been yahay oo uu khatar ku keeni karo taleefankeenna Android.
Qoraalka casriga ahi waa mid ka mid ah astaamaha cusub ee macaamilka emailka Gmail kaas oo aad si dhakhso leh ugu sameysan karto emayllada moobilkaaga.
Sida loo khariideeyo furaha Bixby kaaliyaha Google ee Samsung Galaxy-kaaga oo leh Tasker
Tasker waa la cusbooneysiiyay beta si aad khariidad uga dhigan karto badhanka Bixby oo aad markaa u bilowdo Kaaliyaha Google. Mid ka mid ah falalka ugu caansan.
Ka ogow wax badan oo ku saabsan faallooyinka sheegaya in haysashada taleefankaaga Android aad had iyo jeer gasho ay tahay wax xun isaga. Ma runbaa mise waa quraafaad?
Maxaa la sameeyaa haddii afhayeenka taleefankaaga Android uu joojiyo shaqada
Baro xalka qaar ka mid ah guul darrooyinka guud ee ku dhaca afhayeenka taleefankaaga Android ee mararka qaarkood joojiya shaqada.
Sida loo qaabeeyo furaha Bixby si loo furo Kaaliyaha Google marka Samsung aysan kuu oggolaan doonin
In kasta oo Samsung horeyba u oggolaatay inay barnaamij kasta ka furato furaha Bixby, way ka reebban tahay Kaaliyaha Google. Waxaan ku tusineynaa sida loo badbaadiyo ka-reebitaankaas.
Maxaa la sameeyaa haddii Android auto-rotate uusan shaqeyn
Soo ogow xalalkan si aad u raacdo marka wareegga otomaatiggu aanu ka shaqeynin taleefankayaga Android oo mar labaad ka shaqee.
Sidee looga soo kabanayaa ogeysiisyada la tirtiray ee ku saabsan Android
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sida ay suurtogalka u tahay inaad gasho qoraalka ogeysiiska ee ku jira Android tallaabooyinka ama codsi u ah.
Sida loo kharijiyo badhanka Bixby si loo bilaabo barnaamij ama amar Samsung Galaxy ah oo leh One UI
Xaqiiqdii, qaabeynta badhanka Bixby si loo bilaabo barnaamij ama amar waxaa kaliya lagu sameyn karaa Samsung Galaxy oo leh One UI.
Sida looga beddelo Google Home midabka nalka nalka ku yaal gurigaaga
Waxaad ka heli kartaa 42 midab oo kala duwan barnaamijka Google Home si aad u bedesho codka iyo diirimaadka jawiga gurigaaga.
Sida dib loogu noqdo naqshaddii hore ee Gmail ee ku jirtay Android
Raadi wax badan oo ku saabsan talaabooyinka la qaadayo si dib loogu helo naqshaddii hore ee barnaamijka 'Gmail' taleefankaaga Android.
Soo ogow habka aad ku arki karto isticmaalka RAM-ka ee barnaamijyada lagu rakibay taleefanka Android.
Android Q ayaa maamuli doonta waqtiga aad ku bixiso websaydh
Raadi wax badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee lagu soo bandhigayo Android Q si loo xakameeyo inta jeer ee aad ku qaadato bogga internetka.
Sida loogu abuuro cinwaanno firfircoon fiidiyowyadaada qaab aad u fudud
Tababarka fiidiyowga ee aan ku barayo inaad abuurto cinwaanno tayo leh, cinwaanno firfircoon si aad ugu adeegsato fiidiyowyadaada ama sheekooyinkaaga ku yaal Instagram, Facebook ama WhatsApp.
Baro wax badan oo ku saabsan sida ugu badan ee looga faa'iideysan karo wadaagista Khariidadaha Google iyo kula tali boggaga kuwa kale.
Soo hel shantan khiyaano ee aad wax badan uga heli karto akoonkaaga Telegram ee ku yaal Android isla markaana u habeyn isticmaalkiisa.
Sida loo qasbo joojinta barnaamij ku saabsan Android
Soo ogow habka ugu fudud ee ay suurtogalka u tahay in lagu qasbo joojinta arjiga taleefankayaga Android laba tallaabo oo fudud.
Sida loo dajiyo Android dadka waaweyn
Sida loogu dajiyo telefoonka Android hab fudud oo loogu talagalay dadka waayeelka ah. Soo ogow talaabooyinka la raaco si ay u fududaato adeegsiga.
Sida loo sameeyo kaliya Google Play cusbooneysiinta barnaamijyadaada
Ka ogow wax badan oo ku saabsan ilaalinta cusbooneysiinta Google Play iyo sida muuqaalkan looga shaqeyn karo Android.
Waa maxay gyroscope-ka ku shaqeeya Android-ka maxaase loogu talagalay?
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan waxa loo yaqaan 'gyroscope' ee ku jira taleefanka Android iyo sidoo kale sida ay faa'iido ugu leedahay taleefannada casriga ah maanta.
Muuqaal fiidiyow ah oo aan ku tusayo 7 talooyin ama 7 shaqooyin WhatsApp ah oo ay tahay inuu qof walba ogaado, in kasta oo uusan qof walba ogayn inay jiraan.
Sida loo soo dejiyo daboolida heesaha maktabaddayda muusikada
Dhegeysiga codsiyada adeegsadayaasha bulshada 'Androidsis Community' ee ii yimaada aniga oo adeegsanaya noocyada kala duwan ...
Sida loo badalo magaca Bluetooth Bluetooth
Soo ogow talaabooyinka la raaco si aad awood ugu yeelatid inaad ku bedesho magaca Bluetooth-ka casrigaaga casriga ah qaab fudud.
Soo ogow haddii ay macno samaynayso inaad u isticmaasho warqad-madow madow taleefankaaga Android si loo yareeyo isticmaalka batteriga ee taleefankaaga.
Sida loo raaco meheradaha Khariidadaha Google
Soo ogow sida aad ula socon karto ganacsiga qaab aad u fudud oo Khariidadaha Google ah oo ku saabsan Android oo ka digtoonow dalabyada iyo dallacaadaha.
Barnaamijyada Android ee keydinta xogta
Soo ogow barnaamijyada Android ee hadda leh habka keydinta xogta isla markaana soo ogaato sida ay suurtogal u tahay in la kiciyo.
Sida loogu daro ama looga saaro habka lacag bixinta Google Play
Soo ogow habka ugu fudud ee ay suurtogalka u tahay in lagu daro ama laga saaro hababka lacag bixinta akoonkaaga Google Play si aad u iibsato codsiyada.
Maxaa la sameeyaa haddii taleefankaaga Android uu barafoobo?
Raadi wax badan oo ku saabsan talooyinkan oo la raaci karo haddii ay dhacdo in taleefankaaga Android weligiis barafoobay.
Sida loo hagaajiyo asturnaanta koontadaada 'Instagram'
Soo ogow qaababka kala duwan ee aan u adeegsan karno hagaajinta amniga iyo asturnaanta koontadayada 'Instagram' ee 'Android'.
Sida loo yeesho Xarunta Xakamaynta ee iOS12 wax kasta oo Android ah.
Fiidiyowga aan kugula talinayo waxa aniga ii ah mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee lagu simo Centrod iyo Control of iOS12 on Android.
Soo ogow sida aad qaab fudud ugu beddeli karto nooca sanduuqa sanduuqa ee Gmail ee taleefankaaga Android.
Sida loo abuuro xirmo istiikarada ah WhatsApp talaabo talaabo ah. (sawirro leh hufnaan iyo qoraal)
Haddii waqti ka hor aan kuu soo bandhigay codsi aad ku abuureyso istiikarada WhatsApp aad iyo aad ...
Waa maxay iyo sida loo qaabeeyo ha u carqaladeyn habka Android
Soo ogow sida aad u habeyn kartid ha khalkhal gelin habka ku saabsan Android iyo waxa qaabkani ka jiro taleefankaaga.
Sida loo beddelo qaabka furitaanka ee Android
Soo ogow talaabooyinka la raaco si aad awood ugu yeelato inaad bedesho qaabka aad ku fureyso taleefankaaga Android qaab fudud.
Sida looga soo kabsado fariimaha la tirtiray ee ku saabsan Android
Soo ogow labada dariiqo ee la heli karo si aad ugu soo kaban karto farriimaha sms ee la tirtiray taleefankeenna Android iyada oo aan dhibaato badani jirin.
Sida loo abuuro tuubbooyinka kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'Android'
Soo ogow sida aad ugu abuuri karto tuuryo kumbuyuutareedka Android adigoon isticmaalin wax codsiyo dheeri ah.
Sida loo beddelo SIM PIN-ka Android
Soo ogow sida aad ugu beddeli karto PIN kaarka SIM-ka ee ku shaqeeya Android iyo sida loo xasuusto PIN-kaaga hore.
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taxanahan shaqooyinkan, qaar iyaga ka mid ah oo qarsoodi ah, oo loo isticmaali karo Gboard isla markaana u oggolaan kara in si fiican loo isticmaalo kumbuyuutarka.
Sida dib loogu warshadeeyo bin Android
Soo ogow sida loogu haysto qashinka dib-u-warshadaynta taleefankaaga Android mahadsanid Dumpster, oo ah codsi bilaash ah oo aad u xiiso badan.
Honor 8X wuxuu cusbooneysiiyaa Android Pie ee Spain
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta 'Android Pie' oo horey loogu sii daayay Sharafta 8X ee rasmiga ah ee Spain saacadihii ugu dambeeyay.
In kasta oo ay tahay inaad ROOT leedahay, waxaad ku hagaajin kartaa tayada maqalka ee LG V30-kaaga habka codka ee DTS 3D Stereo oo ku xaddidan warshadda.
Google waxay ku dhawaaqday waqtiga kama dambaysta ah ee diiwaangelinta Google I / O 2019
Haddii aad rabto inaad tagto Google I / O 2019, waa inaad mar kale kaqeybqaadataa rafcaanka si aad awood ugu yeelatid tikidhada la heli karo, sida sanad kasta.
Sida loo beddelo xawaaraha loo maqli karo ee fiidiyowyada YouTube-ka
Wax ka beddelka xawaaraha fiidiyaha ee fiidiyowyada YouTube-ka ayaa noo oggolaanaya inaan gaarno daqiiqadda ugu xiisaha badan innaga oo aan lumin qayb ka mid ah waxyaabaha ku jira.
Sida loo beddelo xallinta fiidiyowyada YouTube-ka si loo kaydiyo xogta
Waxaan ku tusineynaa sida aan si toos ah ugu beddeli karno xallinta fiidiyowyada YouTube-ka dalabka Android.
Sida loo ogaado shaqaaleeyaha taleefanka nambarka leh
Soo ogow sida ugu fudud ee aad ku ogaan karto hawl wadeenka lambar nambar gaar ah iska leh CNMC
Soo ogow taxanahan tabaha kaa caawin doona inaad yareyso ku tiirsanaanta taleefankaaga Android qaab fudud.
OnePlus 5 iyo 5T waxay helayaan nooca xasilloon ee Android Pie
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta 'Android Pie' ee ku yimaada OnePlus 5 iyo 5T oo horeyba u helay nooca xasilloon ee nidaamka qalliinka.
Sida loo soo dejiyo codsiyada ku jira Android diiwaangelin hore
Soo ogow sida aad u soo degsan karto ciyaar ama barnaamij horay uga diiwaan gashanaa Google Play taleefankaaga Android.
Sida loo qaado shaashadda taleefannada gacanta
Soo ogow qaababka kala duwan ee laga heli karo Android markay tahay qaadashada shaashadaha shaashadaha noocyada taleefannada kala duwan.
Maxay yihiin fariimaha firfircoon ee lagu riixayo Gmail? Ka ogow waxbadan oo ku saabsan astaantan barnaamijka Google Mail ee ku saabsan Android.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee EMUI 9.0 ee Huawei P20 PRO. Qalab Android
Fiidiyowga aan ku tusayo wararka ugu muhiimsan ee EMUI 9.0 ee Huawei P20 Pro, cusbooneysiintii ugu dambeysay ee la helay ee cusbooneysiiya Android Pie.
Sida loo suurtageliyo socodka tilmaamaha Huawei P20 PRO
Fiidiyowga aan ku tusayo tallaabo-tallaabo iyo sida ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee tilmaamku ugu shaqeynayo Huawei P20 PRO oo leh Android Pie EMUI 9.0
Nokia ayaa soo bandhigtay noocyada ay ku cusbooneysiin doonaan Android Pie iyo taariikhdooda
Raadi taleefoonnada Nokia ee hela casriyeynta Android Pie iyo sidoo kale taariikhda ay helayaan cusboonaysiinta.
Maxay yihiin qiimaha ugu yar ee barnaamijyada Google Play marka loo eego wadanka?
Soo ogow waxa ugu yar iyo qiimaha ugu sarreeya ee loo dejin karo codsiyada Google Play iyadoo ku xiran waddanka.
Dejinta Degdegga ah ee Android ee Xarunta Xakamaynta Macruufka
Fiidiyowga aan ku baro iyaga inay yeeshaan Nidaamka Degdegga ah ee Adroid ee Xarunta Xakamaynta ee IOS, taas oo ah, salka hoose ee Android.
Sony waxay bilaabaysaa inay soo rogto Android TV 8.0 tiro badan oo telefishanno ah
Soo saaraha telefishanka ee Sony ayaa soo saaray casriyeyn ku saabsan moodooyinka ay shirkaddu soo bandhigtay intii u dhexeysay 2016 iyo 2018 ee Android 8.0
Sida loo dajiyo ogeysiisyada Chrome dabka ama dabka Android
Raadi sida aad u maamuli karto, u awood u siin karto ama aad u joojin karto ogeysiisyada riixitaanka ee Google Chrome taleefankaaga Android.
Soo ogow dhinacyada ugu muhiimsan ee ay tahay inaad xisaabta ku darsato markaad dooraneyso xeedho wireless ah oo ku habboon taleefankaaga Android.
Sida loo raadsado fariimaha WhatsApp-ka
Soo ogow sida aad u raadin karto oo aad uga heli karto farriimaha ku wada sheekaysigaaga WhatsApp oo aad markaa ku soo ceshan karto macluumaadka.
Sida loo kiciyo qaabka martida ama booska labaad ee Android
Waxaan ku tusineynaa sida loo kiciyo qaabka martida ama booska labaad ee taleefankaaga casriga ah ee 'Android smartphone': kordhinta asturnaanta qalabkaaga!
Sida loo sameeyo GPS on Android si dhakhso leh u shaqee
Soo ogow barnaamijkan aad ku heli karto GPS-ka taleefankaaga Android si aad dhaqso ugu shaqeyso hab fudud.
Sida loo ogaado cinwaanka IP-ga ee taleefankaaga Android
Soo ogow talaabooyinka la raaco si aad u ogaato cinwaanka IP-ga ee Android, labadaba cinwaanka IP-ga gaarka ah iyo cinwaanka IP-ga ee dadweynaha.
Sida loogu daro akoonkii labaad ee Google ee ku saabsanaa Android
Soo ogow talaabooyinka la raaco si aad si fudud ugu darto koonto Google labaad taleefankaaga Android.
Liiska taleefannada LG ee cusbooneysiin doona Android Pie
Soo hel liiska taleefannada LG ee si rasmi ah ugu cusbooneysiin doona Android Pie sannadkan oo dhan sida ay sheegtay shirkadda.
Bixinta Google: Waa maxay, sida ay u shaqeyso iyo bangiyada ay taageerayaan
Raadi wax walba oo ku saabsan Google Pay, waxa ay tahay iyo sida nidaamkan lacag-bixinta u shaqeeyo iyo sidoo kale bangiyada la jaan qaadi kara.
LG G7 ThinQ wuxuu bilaabaa cusbooneysiinta Android Pie
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sii deynta cusbooneysiinta 'Android Pie update' oo horeyba u bilaabatay wareejinta LG G7 ThinQ ee Kuuriyada Koonfureed.
Beddelka ugu fiican ee loogu talagalay Miracast for Android
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan labada tiknoolajiyadood ee lagu beddelay Miracast aaladaha Android muddo ka dib iyo sida ay u shaqeeyaan.
Kuwani waa taleefannada Xiaomi ee cusbooneysiin doona Android Pie
Raadi wax badan oo ku saabsan liiska moodooyinka Xiaomi ee horeyba u xaqiijiyay cusbooneysiinta 'Android Pie' bilaha soo socda si xasiloon.
Galaxy Note 9 iyo Galaxy S9 + ayaa loo cusbooneysiiyay Android 9 Pie oo ku yaal Spain
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta 'Android Pie' ee loogu talagalay Galaxy Note 9 iyo Galaxy S9 + ee Spain oo durbaba bilaabay in la geeyo.
[APK] Sida loo ekeysiiyo shaashadda shaashadda Oneplus 6T ee furaha Android kasta
Waxaan ku barayaa inaad jiliso faraha furaya shaashadda Oneplus 6T. Barnaamij u janjeedha dhanka shakhsi ahaaneed oo aan waligiis u jeedin xagga amniga.
Sida loo arko soo gelitaanka koontadaada 'Instagram'
Soo ogow sida aad u arki karto waxyaabaha ka soo baxa koontadaada 'Instagram' sidaasna ku ogow haddii qof kale soo galo ogolaansho la'aan adiga.
Maxay ku kala duwan yihiin 5G iyo 4G?
Ka ogow wax badan oo ku saabsan dejinta shabakadaha 5G adduunka oo dhan iyo khilaafaadka aan ka helno ixtiraamka 4G ee hadda jira.
Sida loo kala sooco tweets si taariikhi ah barnaamijka Twitter
Haddii aad ka daashay inaadan awoodin inaad ka akhrisato quudintaada Twitter adoo adeegsanaya arjiga rasmiga ah, markaa waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo taleefankaaga casriga ah ee Android.
Android Pie oo loogu talagalay Galaxy Note 9 ayaa na siin doonta ikhtiyaar aan ku dhaqaajineyno Dolby Atmos ciyaaraha si madax-bannaan
Cusboonaysiinta 'Android Pie' ee Samsung Galaxy Note 9 ayaa noo oggolaan doonta inaan dhaqaajino codka Dolby Atmos ee ciyaaraha si gaar ah.
Sida loo helo saamaynta midabka sawirada madow iyo cadaan
Tababarka fiidiyowga oo aan ku tusayo sida loo helo saameynta midabka ee sawirrada laga qaado madow iyo caddaan, saameyn midabkeedu aad u soo jiidasho badan yahay.
Dhammaan siyaabaha loo furo Kaaliyaha Google ee Android
Soo ogow dhammaan dariiqooyinka aan ka heli karno taleefannadeenna Android si aad ugu furto kaaliyaha Google qaab fudud.
Tabaha si looga hortago taleefankaaga Android inuu si gaabis ah u socdo
Soo ogow shantaan tabaha fudud ama talooyinka aad awood u yeelan doonto inaad ka hortagto taleefankaaga Android inuu si tartiib ah u shaqeeyo.
Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaan raacno haddii aan rabno inaan hagaajino dhalaalka ama heerkulka midabka shaashadda Android.
Sida loo sameeyo kaarka bangiga barta Instagram
Soo ogow sida aad ugu soo geli karto kaarkaaga deynta barta Instagram si aad ugu awoodo inaad wax kaga iibsato shabakadda bulshada.
Raadi wax badan oo ku saabsan habka ay tahay inaad u qaabeyso taleefankaaga Android. Talaabooyinka la raacayo ee loogu talagalay dadka leh taleefankooda ugu horreeya ee Android.
Waa maxay iyo sidee buu u shaqeeyaa Miracast?
Miracast: Waa maxay, sida ay u shaqeyso iyo sida ay u soo baxday. Raadi wax badan oo ku saabsan tikniyoolajiyaddan iyo muhiimadda ay ku lahayd Android.
Raadi wax badan oo ku saabsan muuqaalka cusub ee ku yimid Google Play, kaas oo noo oggolaanaya inaan tirtirno dhowr codsi isla waqti isku mid ah.
Xiaomi waxay xaqiijineysaa inay ka shaqeynayaan MIUI 11
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan MIUI 11, oo horumarintiisu mar hore si rasmi ah u bilaabantay sida ay xaqiijisay Xiaomi lafteeda iyo warkeeda.
Khiyaanooyin si looga faa'iideysto Google Translate ee Android
Soo ogow afartan tabaha fudud ee aad ku awoodi doontid inaad uga faa'iideysato tarjumaha Google taleefankaaga Android.
Siyaabaha Looga Faa'iidaysan Karo Badhanka Bixby Taleefankaaga Samsung
Soo ogow habka aad ugu adeegsan karto adeegsiga kale badhanka Bixby ee taleefankaaga Samsung qaab fudud oo markaa u adeegso wax adiga kuu anfacaya.
Soo ogow sida aad u arki karto farriimahaaga Facebook Messenger oo ay ku jiraan kuwa gaarka loo leeyahay ee ku jira Android adiga oo aan adeegsan barnaamijka.
Sida loo galo YouTube daawashada taariikhda Android
Haddii aad had iyo jeer la yaabban tahay sida aan uga heli karno taariikhda ciyaarta YouTube-ka bartayada 'Android terminal', markaa waxaan ku tusi doonaa sida
Android Q wuxuu u furi lahaa qaabka fariinta RCS ee horumarinta dhinac saddexaad
Qaabka RCS wuxuu oggol yahay farriimaha hodanka ah wuxuuna ku jiri doonaa Android Q marka barnaamijyada kale ee fariimaha laga faa'iideysto ay ka faa'iideysan karaan.
Astaamaha ay tahay in kamarad wanaagsan oo ku taal Android ay lahaato
Soo ogow astaamaha ugu muhiimsan ee ay tahay in kamarad kasta oo taleefan Android ah ay ahaato mid tayo wanaagsan leh.
Google Pixels waxay helayaan cusboonaysiinta amniga Janaayo
Google Pixel-ka seddexdiisa fac oo dhan ayaa hela balastarka amniga ee bisha Janaayo, marka laga reebo Nexus.
Android Q ugu dambeyntii wuxuu ku imaan karaa habka mugdiga la filayo
Nooca xiga ee Android, Android Q, wuxuu la imaan karaa gacanta mugdiga ah ee muddada dheer la sugayay ee adeegsadayaal badani ay sugayeen dhowr sano.
Sida loo isticmaalo kordhinta Google Chrome taleefankaaga Android
Soo ogow sida loo isticmaalo kordhinta Google Chrome-ka Android adoo uga mahadcelinaya biraawsarka Yandex-ka Ruushka ee ku siinaya shaqadan.
Sida loo keydiyo fariimaha Telegram
Soo ogow habka aad ugu keydin karto farriimaha dalabka Telegram sidaa darteedna aadan lumin macluumaadkan waqti kasta.
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan waafaqsanaanta Fuchsia, nidaamka hawlgalka ee Google uu ku soo saaro barnaamijyada Android.
Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaad raacdo si aad u awood u yeelatid oo aad u hagaajiso kantaroolka waalidka ee taleefankaaga Android qaab aad u fudud.
Soo ogow sababta taleefankaaga Android uu u adeegsanayo bateriga aad u tiro badan inta uu bilaa shaqada yahay iyo haddii ay jiraan wax aad sameyn karto.
Astaamaha si aad u joojiso marka aad iibsaneyso taleefanka Android
Soo ogow taxanahan shaqooyinka ay tahay inaad barkinta ka joojiso marka aad iibsaneyso taleefan cusub oo Android ah. Hawlaha ugu yar ee waxtar leh.
Kuwani waa soosaarayaasha Android ee cusbooneysiiya moobiladooda
Soo ogow liiska uu diyaariyey AOSMark oo muujinaya noocyada ku qoran Android waa kuwa sida ugu wanaagsan u cusboonaysiiya taleefannadooda illaa iyo hadda.
Tabaha lagu hagaajinayo codka taleefankaaga Android
Soo ogow xeeladahan fudud ee aad ku hagaajin karto codka taleefankaaga Android adiga oo aan dhibaato lahayn oo aad tayo fiican leedahay.
Sida loo abuuro koonto Google cusub oo ku taal Android
Soo ogow talaabooyinka fudud ee ay tahay inaan raacno si aad akoon cusub oo Google uga sameysatid taleefankeena Android.
Sida loo xaliyo dhibaatada soo socota ee Google Play
Soo ogow sida aan u joojin karno cayayaanka oranaya waxaan leenahay soo dejin suge ah oo ku saabsan Google Play on Android.
Xiisaha ugu fiican ee ku saabsan Google Play
Soo ogow shantan xiisaha leh ee ku saabsan Google Play oo aad u badan tahay inaadan aqoon oo waxay kaa caawin doonaan inaad wax badan ka ogaato dukaanka barnaamijka Android.
Sida loo qaabeeyo kaarka microSD-ka Android
Soo ogow talaabooyinka la raacayo si aad si toos ah ugu qaabeyso kaarka microSD taleefankaaga Android, qaab fudud.
Sida loo Xaliyo Shabakada Aan Diiwaangashanayn Dhibaatada ku jirta Android
Soo ogow xulashooyinka kala duwan ee aan haysanno si aan u xallino qaladka oranaya Kama diiwaan gashan shabakadda taleefankayaga Android.
Sida loo istcimaalo tilmaam samaynta Samsung ee One UI
Tilmaamaha tilmaamaha One UI waxay u oggolaaneysaa nooc kale oo waayo-aragnimo is-dhexgal ah oo leh mobilka Samsung. Isku day tabahaan iyo sidaad u dhaqaajiso.
Ka ogow wax badan oo ku saabsan xaqiijinta Google in aysan jiri doonin wax isbeddel ah oo ku saabsan siyaasadda cusbooneysiinta Android One ka dib xan badan.
Ma mudan tahay inaad iibsato Android heer sare ah laba sano ka hor?
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan haddii ay macno leedahay ama u qalanto iibsashada taleefanka sare ee Android laba sano ka hor ama haddii ay jiraan fursado kale.
Soo ogow talaabooyinka la raacayo si aad si fudud wax uga beddesho ringtone-ga xiriir gaar ah oo ku saabsan taleefankaaga Android.
Raadi wax badan oo ku saabsan asalka iyo isbeddelka ay 'Android One' ku qaadatay sannado badan suuqa caalamiga ah tan iyo markii la abuuray.
Ka ogow dhammaan waxyaabaha ku saabsan habka mugdiga ah ee 'Android'. Asalka qaabkani iyo faa iidooyinka uu nooga tagayo telefoonada lagu isticmaalo.
Sida si joogto ah loo tirtiro koontadaada 'Instagram'
Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaad raacdo si aad si joogto ah u tirtirto koontadaada 'Instagram', oo ay suuragal tahay taleefankaaga Android.
Maxaa la sameeyaa haddii Google Play uusan ka furi doonin Android
Soo ogow dhammaan xalalka suurtagalka ah ee aan qaadi karno haddii ay dhacdo in Google Play uusan ka furmin taleefankeenna Android.
Tabaha batteriga taleefankaaga Android
Soo hel xeeladahan fudud ee loogu talagalay batteriga taleefankaaga Android, oo aad ku heli karto hawlgal ka wanaagsan ama aad ku xakameyn karto.
Sida loola wadaago xiriiradaada adoo adeegsanaya WhatsApp
Soo ogow sida ugu fudud ee aan ula wadaagi karno qof kale adeegsiga WhatsApp taleefankayaga Android.
Sida loo soo dejiyo fiidiyowyada Facebook ee ku jira Android
Soo ogow dariiqooyinka la heli karo si aad ugu soo dejiso fiidiyowyada Facebook taleefankaaga Android. Laba hab ayaa loo heli karaa tan.
Maxay yihiin dareemayaasha ugu muhiimsan taleefankaaga Android?
Soo ogow dareemayaasha waaweyn ee aan ka helno taleefankeena gacanta ee Android iyo waxtarka uu mid kasta oo ka mid ahi ku jiro.
Sida loo soo dejisto fiidiyowyada Twitter-ka ee 'Android'
Soo ogow dhammaan dariiqooyinka aan hadda haysano si aan ugu soo dejino fiidiyowyada Twitter-ka taleefankeenna Android.
Waxa la sameeyo haddii aad hesho farriinta Google Play Store ay ku joogsatay Android
Soo ogow waxa ay tahay inaad sameyso si aad u xalliso farriinta Google Play Store ay ugu istaagtay taleefankaaga Android qaab fudud.
Talooyin si aad u badbaadiso iibsashada taleefanka Android
Soo hel talooyinkan fudud ee aad ku awoodi doontid inaad lacag ku keydiso nidaamka iibsiga taleefankaaga cusub ee Android.
Sida loo tirtiro xogta ku jirta taleefanka Android oo leh shaashad jaban
Soo ogow sida aad xogta ugu tirtiri karto taleefanka Android haddii shaashadda qalabka ay jaban tahay. Laba hab oo suurtagal ah.
Sida loo rakibo Google Canvas, barnaamijka cusub ee sawirada Google
Sida loo ogaado haddii WhatsApp uu hoos u dhaco waqti cayiman
Soo ogow habka aad ku ogaan karto haddii WhatsApp uu wakhti kasta ka dhacay taleefankaaga Android oo aad sidaas ku ogaan karto heerka barnaamijka.
Sida loo tirtiro xiriirada nuqul ee taleefankaaga Android
Soo ogow talaabooyinka aan ku dhammeyn karno xiriirada nuqul ah taleefankeena Android ee barnaamijka xiriirada Google.
Sida loo abuuro koox WhatsApp ah oo ay hadlaan kaliya maamulayaasha
Soo ogow talaabooyinka aad ku abuuri karto koox WhatsAppka ah oo kaliya maamulayaasha ka hadli kara. Talaabo talaabo loo sharaxay.
Sida loo duubo shaashadaada moobilka adigoon wax xayeysiin ah bilaashna ka sameynin MNML Screen Recorder
MNML Screen Recorder waa barnaamij aad u wanaagsan oo lagu duubo shaashadda moobaylkaaga, in kasta oo ay ku jirto wajiga beta, wuxuu ku habboon yahay halgannadan.
Sida loo kiciyo talooyinka cusub ee Google Chrome
Raadi wax badan oo ku saabsan talooyinka cusub ee muuqaalka ah ee horay loogu soo bandhigay Google Chrome ee ku saabsan Android iyo sida loo dhaqaajiyo.
Sida loo ilaaliyo sawiradaas yar ee halista ah ee aad ku haysato mobilkaaga oo leh Dabool
Ku dhawaad ​​dhamaanteen waxaan wada leenahay sawiradaas oo aanan rabin cidna inay aragto oo mararka qaar aan ilaawno inay kujiraan sawirka. Daboolku wuxuu u yimaadaa gargaarkeena.
Sida loogu guuleysto lacagta dhabta ah ee lagu ciyaaro tartanka mobilada ee kugu garaacaya Kirismaskan. Meel aan caadi ahayn oo lagu cabiro aqoontaada.
Khiyaamada si fiican loogu dhex maro Google Chrome
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan afartan xeeladood oo aad si fiican ugu dhex mari karto Google Chrome taleefankaaga Android.
Sida loo abuuro muuqaalka kooban Sanadkaaga Facebook
Ka ogow wax badan oo ku saabsan tillaabooyinka si aad u abuurto fiidiyoow kooban oo sanadkaaga ah oo ku saabsan Facebook qaab fudud oo ku saabsan taleefankaaga Android.
Sida loo demiyo ogeysiisyada YouTube-ka ee Android
Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaan raacno barnaamijka YouTube-ka ee Android si aad u joojiso ogeysiisyada barnaamijka.
Waa maxay noocyada lacag-ku-soo-celinta degdegga ah ee laga helo Android
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan noocyada kala duwan ee lacag-ku-soo-celinta degdegga ah ee hadda laga heli karo taleefannada Android.
Sida loo xiro dhammaan tabka furan ee Firefox ee loogu talagalay Android
Browser-ka Mozilla Foundation, Firefox, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee aan maanta ku haysanno ...
Maxay barnaamijyada Android u qaataan meel aad u badan?
Soo ogow sababta ugu weyn ee barnaamijyadaada taleefankaaga Android ay u qaataan meel aad u badan iyo waxa aan ka qaban karno.
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan WiFi 6, oo ah heerka isku xirnaanta wireless-ka cusub ee suuqa la geyn doono sannadka soo socda.
Sida loo furo tab cusub oo xiran oo ku jira Chrome-ka Android
Si dib loogu furo tabskii aan khalad kuxirnay, waa wax aad u fudud hadii aan raacno talaabooyinka aan ku qeexnay qodobkaan.
Sida loo kiciyo habka mugdiga ah ee Ciyaaraha Google Play
Soo ogow talaabooyinka aad ku dhaqaajineyso qaabka mugdiga ah ee ku jira barnaamijka Ciyaaraha Google Play ee taleefankeena Android. Hawsha hadda la heli karo
Sida loo arko tirakoobka socodkaaga khariidadaha Google
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan muujinta tirakoobka socodsiinta ee Khariidadaha Google iyo sida aad ugu isticmaali karto Android.
Sida loo sameeyo Google Play Games si otomaatig ah u gal ciyaaraha
Soo ogow sida aan u dhaqaajin karno gelitaanka otomaatiga ah ee Ciyaaraha Google Play ee loogu talagalay ciyaaraha ku habboon astaanta.
Tabaha si wax badan looga helo barta Instagram
Soo hel taxanahan taxanaha ah ee aad awood ugu yeelan doontid sida ugu badan ee koontadaada 'Instagram' taleefankaaga Android.
Gboard wuxuu ku darayaa 54 mawduucyo cusub oo leh saamaynta miisaanka
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan 54 mawduucyada saameynta wehliyaha cusub ee ku soo kordhaya Gboard, barnaamijka kumbuyuutarka ee loogu talagalay Android
Tabaha lagu iibiyo taleefankaaga Android ee ku jira Wallapop
Soo ogow khiyaamadan aad ku awoodi doontid inaad ku iibiso taleefankaaga Android si aad uga dhakhso badan uguna fudud Wallapop.
Sida loo helo dhawaaqyada gaarka ah ee Google Pixel mobiil kasta oo wata Android Pie
Haddii aad mobiil ku haysato Android Pie, hadda waad rakibi kartaa Google Sounds si aad u hesho laxannada iyo dhawaaqyada gaarka ah ee Google Pixel.
Sida tabarucaad loogu sameeyo NGO-yada ku jira Android ee leh Google Play
Soo ogow sida aan ugu deeqi karno Google Play hay'ad samafal ah munaasabadda Kirismaska ​​taleefannadeena Android.
Sida loo sameeyo sameecadahaaga raqiiska ah si aad ugafiican barnaamijkan
True-Fi waxaad ku horumarin kartaa tayada codka dhagahaaga jaban. Waana run, way shaqaysaa. Waan isku daynay waana kuu sheegeynaa.
Sida loogu diro farriimaha codka guriga adoo adeegsanaya Google Home
Labadaba adoo adeegsanaya Google Home ama Home Mini iyo mobilkaaga, waxaad ku dhawaaqi kartaa farriimaha codka ee qof walba oo guriga jooga uu maqli doono.
Soo ogow sida aan u heli karno taariikhda isbeddelka ee qiimeynta ee isticmaaleyaasha kale ay ku soo rogaan Google Play.
Waa maxay liiska rabitaanka Play Store iyo sidee u shaqeeyaa
Haddii aadan wali cadeyn sida Liistada Rajada ee Dukaanka Play-ka ay u shaqeyso, markaa waxaan ku tusi doonaa sida ay u shaqeyso iyo waxa dhabta ah ee loogu talagalay.
Sida looga nadiifiyo taariikhda raadintaada Dukaanka Play
Haddii aad rabto inaad tirtirto taariikhda raadinta ee Dukaanka Play, qodobkaan waxaan ku tusaynaa dhammaan tillaabooyinka la raaco si loo gaaro.
Sida looga tirtiro barnaamijyada shaashadda guriga
Ka tirtirida codsiyada shaashadda guriga ee terminaalkeennu waa mid aad u fudud mahadnaqa menu-ka macnaha guud ee ay shirkaddeenna na siiso.
Tabaha lagu dalaco taleefankaaga Android si sax ah
Soo ogow tilmaamahan iyo tabahaan aad ugu buuxin karto taleefankaaga Android habka saxda ah iskana ilaali dhibaatooyinka batteriga ama hawlgalka.
Miyaa taleefankaaga la xaday? Sida WhatsApp looga kiciyo
Soo ogow talaabooyinka la raacayo si aad barkinta uga saari karto koontadaada WhatsApp haddii ay dhacdo in taleefankaaga Android la xado.
Sida looga saaro widget-ka barta baaritaanka ee Android-kaaga
Soo ogow habka ugu fudud ee aad uga saareyso widget barta baarista shaashadda taleefankaaga Android.
Sida loo maareeyo loona yareeyo isticmaalka xogta ku jirta Android
Soo ogow wax kasta oo aan sameyn karno si aan u yareyno oo aan u helno maamul wanaagsan oo ku saabsan isticmaalka xogta moobilka taleefannadeenna Android.
Google waxay ka saareysaa taageerada Android 4 Ice Cream Sandwich
Raadi wax badan oo ku saabsan dhamaadka taageerada ay Google siiso Android 4 Ice Cream Sandwich maadaama shirkaddu horeyba si rasmi ah ugu dhawaaqday.
Marka Google ay shaaciso xiritaanka Google Allo waxaa laga yaabaa in la joogo waqtigii wax laga badali lahaa arjiga fariinta, laakiin marka hore waa inaan sameyno xog ururin dhamaan xogta
Sida loogu daro subtitles wicitaanada Skype ee Android
Soo ogow sida ugu fudud ee cinwaanada hoose loogu isticmaali karo wicitaanadaada Skype ee Android, qaabka cusub ee arjiga.
Sida looga saaro qalabka ku xiran shabakadaada Wi-Fi taleefankaaga Android
Waxaan ku baraynaa sida looga gooyo aaladaha la qaadan karo ee aan la rabin shabakadaada Wi-Fi ee NetCut si aad ugu raaxeysato xiriir dhakhso leh.
Soo ogow habka aan uga heli karno taariikhda adeegsiga barnaamijyada ku saabsan Android iyo sida loo tirtiro ama loo demiyo.
Wadarta xakamaynta mugga Android-kaaga
Soo ogow tilmaamahan oo aad ku ogaan karto haddii la gaadhay wakhtigii aad ku beddeli lahayd taleefankaaga Android qaab cusub.
Sida loo joojiyo otoplay-ka bogga hoyga YouTube-ka
Soo ogow talaabooyinka lagu joojinayo shaqada cusub ee otomaatigga ah ee bogga hoyga barnaamijka YouTube.
Abka ugufiican ee bilaashka ah ee loogu abuuro istiikarada WhatsApp
Codsi gebi ahaanba bilaash ah oo loogu talagalay Android oo aan ku abuuri karno istiikarada WhatsApp qaab aad u fudud oo fudud.
Baro dhibaatooyinka soo noqnoqda ee leh waraaqaha sawirada ee Android iyo xalalka iyaga qaab fudud.
Sida loo duubo wicitaanada Skype oo aan lahayn barnaamijyo dhinac saddexaad ah
Soo ogow sida aan ugu duubi karno wicitaanada ama wicitaanada fiidiyaha barnaamijka Skype adigoon u baahnayn barnaamijyada dhinac saddexaad inay sidaa sameeyaan.
Talooyin si aad telefoonkaaga Android u xasilloonaato
Soo ogow tilmaamahan si aad taleefankaaga Android ugu xasilloonaato wakhti kasta wakhti ka badan hab fudud.
Sida loo tirtiro barnaamijyada ku jira ururinta Google Play
Soo ogow sida ugu fudud ee aad uga tirtiri karto ciyaaraha ama barnaamijyada ka soo degsashadaada barnaamijka Google Play barnaamijka laftiisa.
Imisa codsi ayaad haysaa ama aad ku samaysay Android-kaaga? Halkan waxaad ku ogaan kartaa
Soo ogow talaabooyinka aad si fudud ugu ogaan karto tirada codsiyada aad haysato ama aad ku qabatay taleefankaaga Android.
Waa maxay sababta dib u bilaabista taleefankaaga Android uu u hagaajinayo ciladaha badan ee jira?
Soo ogow habka ugu fudud ee dhibaatooyinka lagu xalliyo Android: Dib u bilow telefoonka. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sababta ay u fiicantahay.
Maxaan u wici karnaa XNUMX xitaa haddii aanaan haysan caymis
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan sababaha aan u wici karno lambarka gurmadka degdegga ah xitaa haddii aynaan caymis ka haysan taleefanka gacanta.
Waa maxay noocyada dhawaaqa ee ku jira Android?
Soo ogow noocyada dhawaq ee aan ku leenahay taleefankeena gacanta ee Android iyo dhinacyada ugu muhiimsan ee ku saabsan mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Waa maxay Barashada Mashiinka maxaase loogu talagalay?
Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan Barashada Mashiinka iyo waxtarka fikraddan aan inta badan ku maqalno taleefannadeenna Android.
[Lagu cusbooneysiiyay fiidiyow-tababbar] Sida loo abuuro jadwalkaaga ugu horreeya ee Kaaliyaha Google
Kaaliyaha Google waa kaaliyaha codka ee noo ogolaanaya inaan qabano hawlo kala duwan mahadnaqa joogtada ah. Dheh "Xisbi" oo arag waxa uu qaban doono.
Soo ogow sida loo turjumo qoraalka si otomaatig ah mahadnaqa Gboard barnaamij kasta oo ku jira taleefankeena Android.
Waxa la sameeyo ka hor iibinta taleefankaaga Android
Raadi waxa la sameeyo ka hor intaadan aadin iibinta taleefankaaga Android, si looga fogaado dhibaatooyinka ama lumiso xogta ku saabsan.
Sida looga iibsado koodhadhka codsiyada ama kaararka hadiyadda dukaanka Play
Haddii aad haysato koodh codsi aad ku soo dejiso bilaash ama aad rabto inaad isticmaasho kaarka hadiyadda ee Google Play, halkan waa sida loo sameeyo.
Sida loo kiciyo shaandhada spam ee barnaamijka taleefanka Google
Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaan raacno si aan awood ugu siino firfircoonaanta miiraha ee barnaamijka taleefanka Google sidaasna ku iloobaan wicitaanadan spam.
Sida loo tirtiro akoonkaaga WhatsApp
Soo ogow talaabooyinka la raaco si aad si joogto ah ugu tirtirto koontadaada WhatsApp barnaamijka farriinta lafteeda.
Talooyin si taleefankaaga Android aad uga dhigto mid sii dheereeya
Baro taxanahan tilmaamaha ah si taleefankaaga Android aad ugu waarto inta ugu macquulsan xaaladaha ugu fiican.
Sida loogu daro luqad cusub keyboard-ka casriga ah
Haddii aad rabto inaad luqad cusub ku darto kumbuyuutarka taleefankaaga casriga ah ee 'Android smartphone', waa kuwan tallaabooyinka la raacayo.
Sida loo cusbooneysiiyo barnaamijka 'Play Store' nooca ugu dambeeya ee la heli karo
Soo ogow talaabooyinka ay tahay inaan raacno si aad ugu cusbooneysiiso Play Store nooca ugu dambeeyay ee la heli karo.
Sida looga bilaabi karo xoqashada taleefankaaga Android
Soo ogow hagahan kaas oo lagu ogaanayo talaabooyinka ugu horreeya ee lagaa rabo inaad ku fuliso taleefankaaga Android si aad u barato sida loo isticmaalo.
Sida loo adeegsado muusigga Spotify ee saacadda alaarmiga ee barnaamijka saacadda Google
Soo ogow sida aan ugu adeegsan karno heesta 'Spotify' saacadda digniinta ee qaylo-dhaanta barnaamijka saacadda Google ee Android.
Sida loo tirtiro lambar taleefan oo laxiriira akoonkeena Google
Mar kasta oo aan furno xisaab emayl, sida caadiga ah, adeeggu nama weydiisto oo keliya hal ...
Sida loo ogaado waqtiga aan ku bixino Youtube maalin kasta
YouTube-ka ayaa noqday barta kaliya ee adduunka ka sameysa fiidiyowyada ficil ahaan maaddo kasta oo aan heli karno….
Play Store wuxuu cusbooneysiinayaa naqshadeynta qeybta qiimeynta iyo fikradaha
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan isdhexgalka cusub ee lagu soo bandhigay qeybta qiimeynta iyo fikradaha ee Bakhaarka Dukaanka isla markaana dhawaan laga daayo adduunka oo dhan
Maxay tahay inaan ku xisaabtano markaan iibsaneyno taleefanka Android?
Kala soo bax hagahan iibsashada leh dhinacyada aan ku xisaabtameyno Android markaad dooranayso taleefan cusub.
Sida looga jawaabo ogeysiiska shaashadda qufulka
Haddii aad marwalba rabtay inaad si toos ah uga jawaab celiso ogeysiisyada laakiin aadan waligaa aqoon sida loo sameeyo, qodobkaan waxaan ku tusineynaa talaabooyinka la raaco si loo gaaro.
Sida loo maareeyo hawlgalka ogeysiiska shaashadda qufulka
Ogeysiisyadu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee la ikhtiraacay ee laga heli karo barnaamijyada moobiilka. In kasta oo ay run tahay…